Wasiirka Caafimaadka Puntland oo lagu soo dhaweeyay dalka Norway | Anti-Tribalism
← Muqdisho roadmapka Maxaa looga Qadiyay ??
Sawir Qaadihii Somalichanel Tv ee Magaalada Garoowe oo Xabsiga Loo Taxaabay →
Wasiirka Caafimaadka Puntland oo lagu soo dhaweeyay dalka Norway
Wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Cali C/laahi Warsame oo booqasho shaqo ku jooga Norway ayaa Axadii 13.11.2011, waxaa uu xaflad heer sare loo soo agaasimay kula qaatay jaaliyada Soomaalida ee Oslo iyo agagaarkeeda.
Wasiirka ayaa si aad ah loo soo dhaweeyey, iyadoo dhamaan dadka ay wajiyadooda ka muuqatay farxad gaar ah, maadaama uu wasiirkani ahaa mid Oslo dagaanaan jiray.
Wasiirka caafimaadka Dr, Cali Cabdullahi Warsame wuxuu ka mid ahaan jiray jaaliyada soomaalida reer Oslo, intii uusan Malaysia u wareegin sanadkii 2002-dii, waxaana uu aad ugu faraxay in uu kulan nocaan oo kale ah la qaato jaaliyada reer Oslo iyo nawaaxigeeda.
Kulanka ayaa lagu bilaabay aayado quraan ah oo uu akhriyay Gudoomiye ku xigeenka ururka dhalinyarada Soomaaliyeed – Somaali Youth Network (SYN) Cawil Abdirahman (Cawil Kalaay), ka dibna waxaa xafladda si rasmi ah u furay Gudoomiyaha isla ururkaas Abdirabbi Mohammed Kilwe oo ka hadlay, sababaha ururkaan loo aasaasay, himilooyinka uu hiigsanayo iyo mawduuca kulankaan.
Abdirabbi wuxuu sharaxay Ururka isku xirka dhalinyarada Soomaaliyeed, isagoo sheegay in ururkaan loo aasaasay in uu wax ka qabto waxyaalo aad iyo aad u muhiim ah oo ay ka mid yihiin, waxbarashada, caafimaadka iyo isku xirka dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ka yimid degaanka Puntland. Wuxuu kaloo cadeeyey Abdirabbi in uusan kulanka maanta uusan ahayn mid siyaasadeed, ee yahay mid looga hadlayo arimaha bulshada gaar ahaan caafimaadka iyo tacliinta.
Intaas ka dib waxaa mikrofoonka lagu soo dhaweeyey wasiirka caafimaadka Puntland Dr Ali Abdullahi Warsame, isagoo marakan ka hadlay waxbarashada. Dr Ali oo ah khabiir ku takhakhusay tacliinta iyo manhaj dajinta, ayaa sheegay aad iyo aadna ugu booriyay dhamaan dhalinyarada soomaaliyeed in ay wax bartaan, sababtoo ah kaliya markaas ayaa wadan la hor marinkaraa oo uu qofku noqonkaraa, mid wax soo saara.
Dr Ali wuxuu kaloo ka sharqamiyay waxbarashada in ay sii kala muhiim san tahay, gaar ahaan marka laga hadlayo wadankeenii soomaaliya. Wasiirku wuxuu bogaadiyay in ay wanaagsan tahay in waxbarashada farsamada la barto, sababtoo ah wakhti dheerna maahan, waana xirfad qofku ku shaqaysan karo, isagoo aan wakhti badan isaga bixin.
Xafladaas ayaa waxaa kaloo ka hadlay Karar Shukri Dhoomey, Gudoomiyaha ururka Daryeel, isagoo si aad ah u sii dhaweeyey wasiirka, sheegayna in wasiirku yahay nin mudan in lagu deydo. Sidoo kale wuxuu dhoomey amaan iyo bogaadin u soo jeediyey dhamaan qabanqaabiyayaashii iyo dhalin yaradii soo agaasintay xafladaan quruxda badan, halkaasna hawsha ka sii wadaan, si aan u noqono dad wax qabsada oo karti ku leh wadanka aan daganahay.
Waxaa kale oo ka hadlay Gudoomiyaha ururka hooyooyinka iyo caruurta Sahra Shiino, oo amaan u soo jeedisay wasiirka soo dhawaysay.
Shucuurta dadka ayaa aad u kacday, ka dib markii ay indhiisa ilmo ku soo joogsatay Sultaan Bashir oo ka sheekeeyey taariikhdii SYL iyo dhalinyaradii hogaaminaysay. Bashiir ayaa arinkan xasuustay markuu arkay quruxda xafladaan iyo sida aad iyo aadka u saraysa oo loo soo agaasimay iyo ururka wax ka soo agaasimay oo magaciisa la yiraahdo SYN marka la soo gaabiyo.
Bashiir ayaa qaaday heesta wadaniga ah ee SOOMAALIYEED TOOSOO, TOOSOO ISKU TIIRSA EEY, markaas ayaa dhamaan waxaa isataagay dhagaystayaashii iyagoo dhamaantood qaaday SOOMAALIYEEY TOOSOO, TOOSOO ISKU TIIRSADA EEY.
Birir yar, cunto fudud iyo cabitaan ka dib ayaa xafladii meesheedii ka sii socotay, iyadoo ay qudbado soo jeediyeen odayaasha jaaliyada soomaalida ee oslo iyo nawaaxigeeda.
Mar kale ayaa wasiirka caafimaadka Puntland Dr Ali Abdullahi Warsame, lagu soo dhaweeyey mikrofoonka, isagoo markaan ka hadlay caafimaadka. Dr Ali ayaa si qotodheer uga hadlay xaalada caafimaad ee guud ahaan soomaaliya, gaar ahaana Puntland. Wasiirka ayaa sheegay in Puntland caafimaadkeedu hadda meel fiican marayo oo marba marka ka danbaysa ka soo fiicnaanayo.
Wasiirka wasaarada caafimaadka ayaa sheegay in uu gabi ahaanba dib u habayn ku sameeyey wasaarada caafimaadka ka dib markuu la wareegay xafiiska. Dr Ali wuxuu ka warbixiyey wax qabashada wasaaradiisa, isaga oo sheegay in wasaaradu ku jirto kuwa ugu waaweyn wasaaradaha, tahay wasaarada la aamin san yahay in ay tahay midda ugu tayada wanaagsan.
Wasiirku wuxuu kaloo ka warbixiyey sida u damacsan yahay in uu u kobciyo xarumaha caafimaadka puntland. Balse wasiirku wuxuu kaloo sheegay in ay Guud ahaan soomaaliya ay haysato dhibaato ah, in dhakhaatiirtu ku yartahay, isagoo tusaale u soo qaatay, puntland oo uu wasiirku sheegay in ay joogaan oo kaliya 101 doctor, badankoodu aysan lahayn takhakhus gaar ah.
Sidoo kale wuxuu wasiirku sheegay in aysan haysan ama aysan u dhamayn qalabka caafimaadka oo aasaasiga ah, tusaale, soomaaliya oo dhan waxaa laga waayay mashinka sanka iyo afka looga xiro marka qofka la qalayo (Osygen generater), sidaa darteed aan la qalikarin dad badan, sida caruurta 5 sano ka yar, waayo naftooda ayaa khatar galaysa.
Tusaale wuxuu wasiirku u soo qaatay, gabar Australia kala timid haan yar oo Oksijiin ah. gabadhaas waxay haantaas yar ku badbaadisay 36 caruur ah iyo hooyooyinkood. Intaas ka dib wasiirku wuxuu ku booriyey qurbajoogta soomaaliyeed in ay fadhiga ka kacaan oo ay wadankii wax la qabtaan, maadaama aysan jirin dawlad qabaynaysa ama hanqab tiraysa baahida bulshada.
Xafladaan ayaa kicisay shucuurta dhamaan dadkii ka soo qayb galay rag iyo dumarba, waxaana lagu balamay in mashinkaas insha allah jaaliyada Norway ay ka qayb qaatado amaba gato isaga oo dhan, waxaanaa loo xilsaaray mashruucaas Ururka isku xirka dhalinyarada soomaaliyeed ama Somali Youth Network iyo Gudoomiyaheeda Abdirabbi Mohammed Kilwe.
Qabanqaabiyayaasha xafladaan waxay u mahadcelinayaan dhamaan intii nagu caawisay in ay qabsoonto xafladaani. Gaar ahaan waxaan mahad gaar ah u celinaynaa Xiriiriyaha barnaamijka Ahmed Khadar Looyaan.